Izigqoko zini ezithakazelisayo kunazo zonke ezenzakalweni zonyaka we-Autumn-Winter 2015-2016 - amathiphu nemifanekiso
Imfashini Yabesifazane Amathrendi
Imfashini yefashini, i-Autumn-Winter 2015-2016 (isithombe): yikuphi okugqoka kuyoba yindabuko kakhulu ngo-2016?
Izindwangu zokukhanya ezikhanyayo, izithungo eziqinile, izitayela ezinamandla ezithandayo kanye nezitayela ezimangalisayo! Kuyoba izingubo ezimfashini Autumn-Winter 2015-2016. Ngehla nge-minimalism ne-laconicism - yisikhathi sokuba onobuhle obuhle futhi obugqamile! Ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izitayela zokugqoka zabesifazane manje? Bese uqiniseke ukuthi ufunda lesi sihloko kuze kube sekupheleni.
Imfashini igqoka ngesizini sase-Autumn-Winter 2015-2016: izitayela eziyinhloko
Njengoba kungenzeka ukucabanga, isizini sase-Autumn-Winter 2015-2016 sizojabulisa abesifazane besifazane abanethuba lokuzizwa njengabaduki bangempela. Naphezu kokuncintisana nokusebenza okwenzekayo emaqoqweni ekwindla-ebusika ka 2015-2016, abaqambi abakwazi ukumelana futhi banquma ukufaka amafantasi abo okuqala futhi acacile emigqokweni. Zombili izinketho zansuku zonke kanye nezitayela zakusihlwa ziyizibonelo zangempela zengqondo nocansi. Ubuningi bezinto ezicwebezelayo, izindwangu ezibonakalayo kanye namacilongo aqinile aklanyelwe ukwakha isithombe somlingisi wesifazane (Blumarine, Marchesa, Elie Saab).
Akubona bonke abaklami befeshini kule nkathi "ubulili obukhazimulayo" obukhazimulayo. Isibonelo, i-Dolce neGabbana ne-Versace bathembele ekukhangeni okufihliwe. Ekuboneni kokuqala, izinguqulo ezenzelwe izambatho zabesifazane zibonakala zithobekile futhi zivinjelwe. Kodwa ubude obufushane (cishe wonke amamodeli aboniswa ama-dresses amancane) nezesekeli ezikhanyayo zenza izingubo ezilula zibe izikhali zokubhujiswa okukhulu kwezinhliziyo zabantu.
Amathrekhi ombala oyinhloko afaka ama-shadow shades ajulile. Izingubo eziningi ziyi-emerald, igolide, iplamu, obomvu, i-burgundy ne-blue. Kubuye kube nemfashini ukugqoka amamodeli amnyama omhlophe namhlophe.
Isithombe sezimpahla ezifashisayo nezokuhlwa ezifashisayo, i-Autumn-Winter 2015-2016
Indawo ekhethekile emibonisweni yanikezwa ukugqoka isitayela se-retro. Isibonelo, izinhlobonhlobo zegolide ezimhlophe ezivela kuma-80 avela ku-Blumarine noma izingubo zebhola ku-Empire style kusuka kuMarchesa. Izithombe ezinomsoco ezinomsoco obomvu nezibomvu zensimbi ezihlaza okwesibhakabhaka ezinamahlumela aphezulu kakhulu ezethulwa u-Elie Saab. Isilikhi, i-satin, i-lace, i-chiffon yizinto ezisemqoka ezisetshenziselwa abaklami befestile ukudala lezi zithombe. Ubumba obuningi, ukugcizelela ubuhle bokusika nokukhanya kwembethe, banikeze abesifazane besimfashini ukuba bahlanganise izingubo kanye nezinsimbi zomlilo (manto, collars, izikhwama).
Eyakhe, ehluke emikhondweni enkulu yezimfashini, ukubheka izingubo ezigqoke izitayela kwafaka umkhiqizo uMoschino. Izigqoko zabesifazane ezivela eqoqweni lakhe zifana nomfaniswano wezisebenzi zikaMcDonald's, ama-wrappers amakhulu avela ushokoledi nama-chips, futhi agqoke ngesimo somdwebo we-cartoon SpongeBob Squarepants.
Izambatho ezingaphansi kokuqala nezingaphezulu zingabonakala emibonisweni kaMichael Kors, uHelut Lang, uBabley Mischka. Isisekelo salezi qoqo kwakuyizibhizinisi ze-tweed, ezifudumele zoboya kanye nezithombe ezinhle.
Izitokisi zesikhumba ezenziwe ngemfashini, Ubusika 2016: izithombe zesikhwama sezintambokazi besifazane ezifashisayo kakhulu, i-Autumn-Winter 2015-2016
Umthambo we-Gothic ubuyele esimweni
Indlela ongakhetha ngayo nokugqoka izingubo ezingaphezulu: amathiphu amathathu kusuka ochwepheshe
Ukukhwabanisa Imfashini Ekupheleni Kwama-2016
Ekuphakameni: izindlela ezintathu zokubukeka ziphathekayo njalo
I-fashionable ebusika kunazo zonke izembatho zika 2016-2017 (isithombe ngezitayela)
Jamu kusuka ku-cranberries
Ukusetshenziswa komdanso womzimba womuntu
Izinganekwane eziyigugu: ama-brooches ezithokozisa u-Van Cleef & Arpels
Ukushisa, i-oil manicure
I-fashionista encane: ukubuka kabanzi izingubo ezimfashini kakhulu zamantombazane 2016
Ukuthuthukiswa kwemizwelo ezinganeni
Inkukhu ebhakawa ne-cream evela ePhiladelphia, tee
Isobho se-chicken giblets ne-foie gras
U-Alexei Panin uphawule ngevidiyo yezocansi nenja
Amafutha we-almond for eyelashes
Rye bran for ukulahlekelwa isisindo: izakhiwo, zokupheka, ukulayishwa usuku
Iholidi eliphelele kanyekanye
I-American Cocker Spaniel, Ukunakekelwa
Ukuphefumula kusuka enkukhu yesibindi
Kulungile ukuthatha izinqubo zokugeza
Kulimaza futhi kuzuze ama-pistachios